Ụlọ ọrụ News Manufacturers - China Industry News Suppliers & Factory
Ihe mkpuchi ahụ na-ekpo ọkụ ọ na-emerụ ahụ ike?
Oge oyi na-abịa. Achọrọ m ịzụta akwa mkpuchi. Ọ na-emebi ahụ ike m? Ebe ọ bụ na ndị mmadụ amaghị ihe banyere ihe ọhụrụ, ha ga na-enwe obi abụọ ma ọ bụ tụkwasị ha obi. Agbanyeghi na akwa oku eletrik abughi ihe ohuru ohuru, obu ihe ohuru nye ndi na adighi abata ...
Maka ụmụ okorobịa site n'oge oyi: Gwa gị ihe nzuzo, Otu ọkpa kpụ ọkụ n'ọnụ bara uru ogologo oge ise! Na nso nso a, a na-enyocha akụkọ banyere “akpa ọkpa nwata nwoke Shandong bụ nke nne ya jiri buru ibu. Mgbe ọ lọtara ezumike, ọ chọpụtara na ngwongwo ya ...
Uwe eletriki na-ekpo ọkụ bụ ụdị uwe nwere ike ịmepụta ọkụ na ikpo ọkụ na-arụsi ọrụ ike. Principlekpụrụ ya bụ ijikọ ike ọkọnọ, ngwaọrụ njikwa ọnọdụ okpomọkụ, ngwaọrụ nchedo nchekwa na ihe ọkụkụ site na wires iji mepụta okirikiri, ma jiri ike ịchịkwa ọkụ eletrik ...
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Eleheat maka ndị na-emepụta kpo oku kpo oku?
Ihu igwe ji nwayọ nwayọ nwayọ, ụdị ndị eji akwa akwa amalitelarị oge mgbụsị akwụkwọ na akwa oyi. N'oge a, ọ bụ oge na-ekpo ọkụ maka kpo oku kpo oku. Agbanyeghị, e nwere ọtụtụ ndị nrụpụta nke ikpo ọkụ na ụlọ ọrụ a, gịnị kpatara ịhọrọ Southern Sparkle Wearable Technology Co., Ltd? 1 ....
Uwe mara mma, kwesịrị ị paya ntị na nchekwa nchekwa nke uwe
Uwe dị mkpa maka onye ọ bụla. Uwe abụrụla akpukpo aru nke mmadu site na mbido rue mma na nchedo. Nchebe nke uwe chọrọ nlebara anya. Nzube nchekwa nke uwe bụ otu n'ime usoro mmepe nke usoro imepụta ụdị ejiji ọgbara ọhụrụ. Mmepe nke ...
Kedo akwa kpo oku, Mee ka obi uto gi rute
Heating mpe mpe akwa na-bụ-eji dị ka a kpo oku mmewere na ọgụgụ isi kpo oku uwe ugbu a. E wezụga nke ahụ, n'ihi ịdị nro na nhazi, a ga-ejikwa pad na-ekpo ọkụ na ngwaahịa ụlọ, ngwaahịa physiotherapy na ndị ọzọ. Dị ka ogologo oge dị ka imewe bụ ihe ezi uche, ihe niile kwere omume. Mgbe okpomọkụ ...
Gịnị bụ smart uwe
Kedu uwe mara mma? N'oge a, ọ bụ oge ọgụgụ isi. Smart phones, smart smart, smart cars, ọgụgụ isi mmụta abanyewo n'ime ndụ anyị, na smart uwe bụkwa onye nyocha nke ọgụgụ isi oge. Yabụ, gịnị bụ uwe mara mma? Smart uwe bụ Nchikota o ...
N'ime ọkara afọ mbụ, uru gbakwunyere ụlọ ọrụ na-egbochi akwa ọrịa na-eji 57.8% mụbaa
Site na Jenụwarị rue June, ụlọ ọrụ mmepụta ihe gbakwunyere ọnụ ahịa ụlọ ọrụ dị elu akọwapụtara na ụlọ ọrụ akwa akwa China belatara na 6.7% afọ-afọ, na-ebelata ihe dị ka pasent 9.8 ma e jiri ya tụnyere nke mbụ. Ndị ụlọ ọrụ na-emepụta akwa akwa na-arụ ọrụ bụ ndị dọkpụrụ duma dupụrụ ya…
Onye nta akuko ekpughere ‘ihe nzuzo’ n’elu ikuku maka nsogbu ọrụ na-ahapụ ndị na-ekiri ihe ijuanya
site na nhazi na 20-08-10
Onye nta akụkọ 10 ọwa ahapụla ndị na-ekiri ihe ngosi mgbe ekpughere nkọwa zoro ezo na obe ndụ ya na ọ nweghị onye chọpụtara. Onye ntaakụkọ TV ti Australia kpughere ụzọ “nzuzo” ọ na - esi edozi nnukwu nsogbu ọrụ. Onye nta akụkọ ọwa Channel 10 Kristina Costalos kesara vidiyo na TikTok na-ekwu maka cha…
COO di egwu Armor si COO Gregory Thomas emechie otutu ahia ijeri dollar na California sitere na North face
site na nhazi na 20-08-03
Ọgọstụ 27, 2020 Greg Thomas, Onye isi ndị ọrụ na-ahụ maka mgba ọkụ gbara arụkwaghịm na California The North Face. Okpomoku di okpukpo bu uzo eji eme uwe elu nke Colorado nke putara okomoko na uwe egwuru-egwu agwuru. Ọ bụrụ n’ị bụ camper, sker, biri na oyi c ...
Ndụmọdụ maka otu esi ekpo ọkụ
Ndị mmadụ na-ata ahụhụ na oge nkịta, nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ị ga-akwadebe maka oke ọkụ: o zere nnukwu ọrụ. Anwala ime ọtụtụ ihe n’ụbọchị na-ekpo ọkụ. ụọ ọtụtụ mmiri; ọbụlagodi na akpịrị akpọghị gị nkụ. Zere ihe ọholicụholicụ na-egbu egbu na ihe ọ liquụ liquụ dị elu shuga ma ọ bụ caffeine. Ọ bụrụ na dọkịta gị ge ...
12V Njọ Car Seat fom, kpụ ọkụ n'ọnụ Ogologo ọkpa, Njọ insoles rechargeable , Cotton Thermal Underwear, kpụ ọkụ n'ọnụ Vest, kpụ ọkụ n'ọnụ Jacket ,